Weerar Khasaare Geystay Oo Ka Dhacay Afgaanistaan – Goobjoog News
Weerar Khasaare Geystay Oo Ka Dhacay Afgaanistaan
Mas’uul ka tirsan waddanka Afghaanistaan ayaa waxa uu sheegay in 7 qof ay ku dhimatay 22 kalane ay waxyeello ka soo gaartay qarax lala beegsaday meel ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Afgaanistaan, kuwaas oo sugayay in la siiyo mushaaraadkooda ee magaalada Lashirgaa ee koonfurta waddankaasi, mas’uuliyadda weerarkaan ayaa waxaa sheegatay dhaqdhaqaaqa ururka Daalibaan .
Afhayeen u hadlay ciidamada ku sugan magaalada Lashirgaa ayaa waxa uu sheegay dadka dhintay inay ku jiraan 3 askari , balse taliyaha booliska ayaa isna waxa uu sheegay dadka dhintay inay ku jiraan caruur.
Ururka Daalibaan ayaa waxa uu sheegtay mas’uuliyadda weerarkaan waxaana xaqiijiyay Afhayeen uhadlay ururkaas oo lagu magacaabo Yuusuf Axmadi kaasoo bartiisa twitterka ku qoray inay dileen 39 askari oo ay ku jiraan saraakiil.
Dhanka kale madaxweynaha dalka Afghaanistaan Cabdullaahi Cabdullaahi aya waxa uu cambaareeyay weerarkaan isagoo tacsi udiray dadkii qoysaskii ay waxyeeladu ka soo gaartay .
Gobolka Haliminda ayaa waxa uu ka mid yahy gobolada ugu badan oo ay ka dhaceen dagaalada ka dhacay koonfurta waddanka Afghaanistaan.
Galmudug: Maleyshiyaad Ku Dagaalamay Deegaanno Ku Hareeraysan Gadoon oo La Heshiisiiyay
Puntland Oo Shaacisay Xilliga La Aasi Doono Meydka Jeneraal Cadde Muuse
Dowladda Kenya Oo Lagu Eedeeyey Iney Ku Fashilantay La Dagaalanka Al-shabaab